Ama-marathoni anelukuluku nelifuna kakhulu emhlabeni | Izindaba Zokuhamba
Ukugijima sekuyinto yomphakathi eminyakeni yamuva. Kungumdlalo osezihlalele, njengoba labo abawujwayelayo bethi ubenza bazizwe bengcono futhi bamomotheka ngokwengeziwe. Ukuthandwa kwayo okusheshayo kubonakala kunani elikhulu lama-marathons, izinhlanga ezidumile kanye nama-marathons ayingxenye agcinwe kuzo zonke izingxenye zomhlaba. Njengoba umkhuba wayo ususabalele kakhulu futhi kunabahlanganyeli abaningi, izinselelo ziyanda. Eziningi zazo zinzima impela.
Kubo bonke abathandi balo mdlalo ofinyelelekayo, nakhu beya amanye ama-marathon akumele aphuthelwe uma ufuna ukuthola izinselelo ezintsha futhi uthole izindawo ezintsha. Ungalokotha ugijime noma iyiphi yazo?
Esinye sezizathu sokugijima kubaluleke kakhulu eKenya yingoba umdlalo ungakususa ebuphofini. Ezweni elibhekene nokushoda okuningi, lo mdlalo uvumela labo ababa ngochwepheshe ukuthi baphile ngokunethezeka. Lapho, ubumbano lwesigamu semarathon elwa nengculazi luyenzeka. IKenya, ebangeni elingamamitha angu-2.400 XNUMX ngaphezu kogu lolwandle, yilapho wonke umuntu efuna ukuya khona ukuyoziqeqesha. Futhi-ke, ukubona indawo ukubona izindawo zayo ezinhle kanye ne-safaris.
Kusukela ngo-2002 kwenziwa phakathi kwePuerto Fuy neSan Martín de los Andes, omunye wemijaho ejabulisa kakhulu ewela uhla lwezintaba i-Andes: Cruce Columbia. Inhloso yalo ukuhlanganisa iChile neArgentina ngezindawo ezihlukile, ezihlanganisa amakhilomitha angaphezu kwekhulu ehlukaniswe izigaba ezintathu zamakhilomitha angama-100, 42 nama-28.
Lokhu kungenye yezinhlanga ezinzima kunazo zonke, okufanele uzilungiselele kakhulu. Eqinisweni, iColumbia Crossing inesiqubulo esithi "Akuwona wonke umuntu ongayisebenzisa kodwa akekho ongayikhohlwa."
Abagijimi bachitha izinsuku begijima futhi behlala maphakathi nezintaba, bebekezelela bonke ubunzima obubandakanya lokhu. Umjaho ugijinywa ngamaqembu abantu ababili (abesifazane, abesilisa noma abahlanganisiwe) okufanele bahlale ndawonye phakathi nesifundo. Kusukela ngo-2013, kwanqunywa ukuthi kufakwe isigaba soMuntu ngamunye ngenxa yesidingo esikhulu.
Bathi iTough Guy iyona nkambo yezithiyo eyedlulele kunazo zonke emhlabeni, lapho abagijimi abangama-33% beshiya khona phansi ngoba bengakwazi ukukuqeda. Kungumjaho wengqondo hhayi owenyama ngoba kubaluleke kakhulu ukukwazi ukugcina ikhanda elipholile nokuzola ukuqhubeka lapho umzimba ungasaphenduli.
ITough Guy ibanjelwe eWolverhampton, eWest Midlands futhi iqukethe amakhilomitha ayi-15 emizila enemigudu, amachibi wamanzi kanye nokushaqeka kwe-electro-shock. Inhlangano iphoqa ababambiqhaza ukuthi basayine lokho okwaziwa ngokuthi "incwadi yokufa." Idokhumenti lapho ubungozi obubangelwa ukubamba iqhaza buqashelwa futhi buvunyelwe khona, kukhulula abahleli kunoma yimuphi umthwalo wezomthetho uma kwenzeka ingozi. Inselelo okuthi, ngokusho kwabanye ababambe iqhaza, ukushintsha impilo.
IPolar Night Halfmarathon yenzeka eNorway futhi isebenza ebusuku, ngamahora angama-20 obumnyama nokukhanya okune kuphela okungu-4. Ubungazwa ngoFebhuwari kanti amazinga okushisa aphansi afinyelelwa ebusika enza umjaho ube nzima kakhulu, okwenza kubonakale sengathi amakhilomitha angama-21 awenzayo awapheli.
Kodwa-ke, ama-landscapes enza wonke umzamo uwufanele: Cabanga ukwenza iPolar Night Halfmarathon ngaphansi kweNorway Northern Lights. Okumangalisayo nje.
Amakhilomitha ayi-140 eningizimu yeLos Angeles, edolobheni laseCarlsbad, kubizwa njalo iMarathon of Heroes minyaka yonke, umcimbi wezinhloso zobumbano lapho abagijimi abavela kuwo wonke umhlaba behlangana ukuze bahloniphe abaphikisi abahlukahlukene bezindaba zokunqoba.
Lo mjaho wenziwa ngasemngceleni wePacific futhi njengoba abagqugquzeli uqobo lwabo besho, iCarlsbad imarathon engafani neminye. Uma uzimisele ngokugijima, akufanele uphuthelwe lo mjaho oyingqayizivele. Okulandelayo kuzokwenzeka ngoJanuwari 15, 2017.
IZurich Marathon eseSeville ilungele ukufeza amamaki amahle kwisekethe eliyisicaba. Lo mjaho unesifunda esimangazayo esidlula ezindaweni eziyizifanekiselo kakhulu enhlokodolobha yaseSeville: iPlaza de España, iMaestranza, iMaría Luisa Park, iLa Giralda neTorre del Oro, phakathi kwabanye abaningi.
Ngumjaho obabazekayo eYurophu, ovunywe yi-IAAF kanye ne-AIMS, lapho kunikezwa khona umgijimi ukwelashwa okuhle futhi lapho kunemisebenzi eminingi efanayo ukuhlala okuhlangenwe nakho kokugijima kuphelele ngangokunokwenzeka: izinkulumo kanye ne-colloquia, imihlangano yokuqeqesha, imincintiswano yomgijimi, yokuthatha izithombe nokugqwayiza, njll.
Umzila weZurich Marathon waseSeville uphiliswa ngabahlabeleli phakathi kwezigaba ezithile zomjaho, okwenza kube mnandi kakhulu futhi kujabulise. Izokwenzeka ngoFebhuwari 19, 2017.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ama-marathoni anelukuluku nelifuna kakhulu emhlabeni